Orinasa sosialy, ny revolisiona mangina | Martech Zone
Orinasa sosialy, ny revolisiona mangina
Alatsinainy Martsa 19, 2012 Talata, Martsa 20, 2012 Marty Thompson
Ny haino aman-jery sosialy sy ny haitao sosialy dia singa iray lehibe amin'ny fomba fanaovana orinasa. Nanjary nifamatotra sy natambatra tanteraka tamin'ny ezaka varotra nataonay izy io. Ireo mpivarotra dizitaly dia tsy afaka miresaka momba ny atiny, SEO, fanatsarana ny tranokala, PR. Ny mpanjifa, na tsapany izany na tsia, dia manana andraikitra vaovao tanteraka ao anatin'ny sehatry ny orinasa. Izy ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fomba maro amin'ireo tetikady mpivarotra izay narovana tao ambadiky ny rindrin'ny fahanginana.
Isika mpivarotra dia tsy afaka mieritreritra ny “maha-sosialy”Toy ny zavatra misaraka amin'ny hetsika ataontsika hafa.
Ity zava-misy ara-tsosialy ity dia miroso amin'ny dingana hafa. Mampifantoka ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fomba hanatsarany ny anatiny ny fikambanana ankehitriny, amin'ny fanararaotana ireo tombony azo avy amin'ity fiaraha-miasa vaovao ity.
Toy ny fandrosoana vita amin'ny ERP, CRM, automatisation marketing, sy ny faritra hafa, ny asa sosialy dia revolisiona mangina hafa, miadana miadana indraindray, hafa haingana any amin'ny hafa.
Ny adihevitra momba ny dikan'ny asa ara-tsosialy, ary ny lanjan'inona omeny, raha misy izany, dia mipoitra any amin'ny faribolana sasany. Saingy raha ny fahitako azy dia maneho revolisiona mangina hafa io. Tsy nifoha izahay indray andro ary nahita ny IBM, SAP, Oracle, Salesforce, sy ny hafa, naorina avy hatrany, vonona ny hapetraka. Anontanio fotsiny ireo mpilalao orinasa ireto, dia hitantara tantara tena mahaliana momba ny antony mahatonga ny fiaraha-monina ho zavatra lehibe manaraka izy ireo. Manaiky ny fiaraha-miasa ara-tsosialy ho zavatra mendrika izy ireo. Ny antenaiko dia ny hitrandrahantsika rehetra mampiasa io fotoana io mba hanomezana lanja fanampiny ny lanjan'orinasa, fa mba hanomezana toerana vaovao ahafahana mankalaza ny vaovaon'ny fifandraisan'olombelona sarotra. Eny, mino ny herin'ny geeks aho.
Ireo orinasa izay hahazo tombony voalohany amin'ireo ezaka ireo dia afaka misaotra betsaka ireo izay nanatevin-daharana tsara ny hetsika ara-tsosialy amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifany sy ny fanohanana, ny varotra ary ny faritra hafa miasa. Izy ireo dia mampiditra ireo izay nanao fampiasam-bola lehibe amin'ny fananganana forum forum mahomby amin'ny fiaraha-monina, ekipa serivisy sy mpanohana, sehatra fitantanana fahalalana matanjaka, ary ireo izay nandray ny fiheverana ny CRM ara-tsosialy, ary tena naorina teo amboniny. Famerenana ireo ezaka ireo fotsiny ve ny fandraharahana ara-tsosialy? Heveriko fa tsia ny valiny, fa ny ankamaroan'ny zavatra nianarana, ary ny ankamaroan'ny toa ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiaraha-monina dia ho trosa amin'izany ezaka izany.
Ka ahoana ny raharaham-barotrao? Tsapanao tanteraka ve ny tombotsoan'ny tetikady marketing tafiditra izay misy singa ara-tsosialy manan-tsaina? Inona ny eritreritrao momba ny atao hoe orinasa ara-tsosialy?
Tags: Fiaraha-miasa CommunityDK New MediaMarty ThompsonVarotra sosialyhaino aman-jery sosialy
Marty Thompson Monday, March 19, 2012 Tuesday, March 20, 2012
Strategista momba ny asa sosialy ao amin'ny Marketing Bananas Roa aho. Omeo tsiny ny ray aman-dreniko, ny fitaizako tany am-poko, na ny fitiavako ny lasa, fa ny olona kosa milaza amiko fa tena mahay tokoa amin'ny fananganana fifandraisana sy fifampiraharahana aho, mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny andrasan'ny mpanjifa, sy ireo orinasa lehibe tokony hisy (fa matetika tsy)
Mitadiava rohy miditra mora foana miaraka amin'i Blekko
Tantaran'ny Google Algorithm Changes
Mar 23, 2012 ao amin'ny 9: PM PM
Heveriko fa manana taona maro isika hanitsy ny ambaratongan'ny orinasantsika amin'ny orinasa sosialy. Mbola mamolavola sampana anatiny amin'ny alàlan'ny dingana famokarana izahay raha ny zava-misy dia ny sampana rehetra dia misy fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny marika amin'ny media sosialy - manomboka amin'ny fitarihana, ny sosialy, ny varotra… Indrisy anefa fa tsy toy izany ny fomba firafitry ny hazon-jiro eto amintsika. Mitohy ny fanalana antsika amin'ny vaovao ilaintsika… ary tadiavina!
Hahafinaritra anefa ny hahatongavana any!